Most Influential Chief Marketing Officer(CMO) စာရင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Hyundai ရဲ့ CMO တစ်ဉီး – AutoMyanmar
Most Influential Chief Marketing Officer(CMO) စာရင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Hyundai ရဲ့ CMO တစ်ဉီး
Hyundai ရဲ့ Chief Marketing Officer တစ်ဉီးဖြစ်သူ Dean Evans ကတော့ Sprinklr နဲ့ LinkedIn တို့နဲ့ ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ Forbes ရဲ့ 2018 World’s Most Influential Chief Marketing Officer မှာ နံပါတ် ၈ နေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Evans အတွက် ပထမဉီးဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး… ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်း Most Influential CMO မှာနံပါတ် ၂၉ နေရာကနေပါဝင်ခဲ့ဖူးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Hyundai Motor America ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Kenny Lee ဆိုသူက
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Dean အခုလိုမျိုး Forbes ရဲ့ Most Influential CMO list မှာပါဝင်ခဲ့တာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒီရလဒ်ဟာ သူ့ရဲ့ ဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးရုံသာမက Hyundai Marketing အဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ ပုံရိပ်ကိုပါ မြှင့်တင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dean နဲ့ သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဟာ တိုးမြင့်လာတဲ့ Hyundai ရဲ့ SUV lineup မော်ဒယ်အသစ်တွေကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရုံသာမက သုံးစွဲသူတွေ Brand နဲ့ပိုမိုရင်းနှီးပြီး နားလည်လာအောင် Customer-oriented program ဖြစ်တဲ့ “Shopper Assurance” ကိုလည်းဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။”
Screenshot from Forbes
Dean နဲ့ သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၆ တုန်းက Hyundai Super Bowl ကို မိတ်ဆက်ထားတဲ့ “First Date” ဆိုတဲ့ Commercial တစ်ခုနဲ့ USA today Ad Meter ရဲ့ဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဉီးဆုံး ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆုရရှိခဲ့တဲ့ “First Date” ကြေညာကတော့ ?
ဒါ့အပြင် Dean ဟာ Hyundai ကို BuzzFeed, iHeartMedia တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီး “Kamp Kona” ဆိုတဲ့ Music Festival ကို3ပိုင်းခွဲပြီးဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ Local creator နဲ့ပူးပေါင်းပြီး လာမယ့်ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပသွားဖို့ရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ Festival ပိုင်းခြားထားပုံကိုတော့ ဒီကနေ တဆင့်သွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒါဟာ Dean တို့အဖွဲ့ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Campaign တစ်ခုလို့ပဲဆိုရမှာပါ။
Dean လုပ်ခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာ Campaign ကတော့ Marvel Studio နဲ့ပူးပေါင်းမှုပါပဲ။ မကြာခင် ရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပြီး Infinity War နဲ့ချိတ်ဆက်ဇာတ်ကားလို့လဲပြောနေကျတဲ့ “Ant-Man and the Wasp” မှာ Veloster အသစ်ကြီးကို ပြသသွားမယ့် အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hyundai နဲ့ Marvel Studio ပူးပေါင်းမှုကို ကျွန်တော်တို့ Automyanmar ကပြီးခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်တုန်းက ဖော်ပြခဲ့ဘူးပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိဖို့ အတွက် ဒီကို သွားစေချင်ပါတယ်။ ?)
အခုလို မရိုးသွားလောက်တဲ့ မာကတ်တင်းအစီအစဉ်တစ်ခုပြီး တစ်ခုဖန်တီးမိတ်ဆက်ခဲ့တာကြောင့် Dean အနေနဲ့ အခုလို World’s Most Influential Chief Marketing Officer list ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တာ ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပါပဲ။ လာမယ့်အချိန်ကာလတွေမှာ Dean အနေနဲ့ Hyundai brand အတွက် ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာ မာကတ်တင်း အစီအစဉ်တွေရှိသေးလဲဆိုတာကိုတော့ သိချင်မိနေပါပြီ။